Madaxweyne Farmaajo oo booqasho Labaad ku tegaya dalka Eriteriya iyo ujeeddada ka danbeysa – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Farmaajo oo booqasho Labaad ku tegaya dalka Eriteriya iyo ujeeddada ka danbeysa
Muqdisho (Madal Furan) – Galabnimada maanta ayaa la filayaa in Madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tago magaaladda Asmara ee dalka Eriteriya.
Lama shaacin ujeeddada ka danbeysa socdaalka Madaxweynuhu ku aadayo dalka Eriteriya, waxaase ilo doblomaasiyadeed sheegayaan in booqashadani ay salka ku hayso in Madaxweyna Farmaajo uu doonayo inuu dowladda Eriteriya uu ku qanciyo inay kala heshiiyaan dowladda Jabuuti xiisada colaadeed ee weli ka taagan xuduuda Labada dal u dhexeysa.
Dowladda Jabuuti oo dalka Soomaaliya Olog siyaasadeed la laheyd ayaa si weyn uga carootay hadalkii Madaxweyne Farmaajo Qaramada Midoobay kaga codsaday in dowladda Eriteriya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ee horay loo saaray.
Dowladaha Itoobiya iyo Eriteriya ayaa dhowaan waxay ka heshiiyeyen colaadii sababgtay in Labada dal uu dhex maro dagaal dhiig fara badani uu ku hoobtay, waxaana Raysal Wasaare Abiy Ahmed uu QM ka dalbay in cunaqabateynta hubka ee la saaray laga qaado maadaama Labada dal heshiiyeen.
Dowladdaha Soomaaliya iyo Eriteriya ayaa Labadaba waxaa QM horay u saartay cunaqabateyn, waxaana jira Guddi Qaramada Midoobay u xil saartay dabagalka dhaqan galka cunaqabateynta hubka ee la saaray Labadaas dal.
Haddaba, Madaxweyne Farmaajo oo uu u muuqday inuu u durbaan tumayo heshiiska dhex maray dowladdaha Itoobiya iyo Eriteriya ayaa lagu dhaliilay inuu si fudeyd dhexda ugaga dhacay siyaasad aan haba yaraatee wax faa’iido ahi ugu jirin Qaranka Soomaaliya.
Iminka way caddahay in Madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu dowladda Jabuuti ka qanciyo gefkii ka dhacay maadaama ay dowladda Eriteriya ay weli ciidamadeeda ku soo daabuleyso xuduuda ay la leedahay dalka Jabuuti, halkaasoo uu ku yaal dhul Labada dowladood isku hayaan lahaanshihiisa.
Booqashada Madaxwey eFarmaajo ayaa waxay ku soo beegmeysaa xili uu dalka Eriteriya ku sugan yahay Raysal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo booqday dalkaas markii uu ka soo laabtay shirkii Madaxda Afrika ay u tageen dalka Shiinaha.
Abiy Ahmed ayaa dekedda Casab xili uu ku soo xirtay markab ay dowladda Itoobiya iska leedahay, wuxuuna wadaa qiimeyn ku wajahan sidii dib loogu furi lahaa xiriirkii ganacsiga iyo isticmaalka dekeddaha dalka Eriteriya.
Indoniisiya oo 300 oo yaxaas lagu dilay, ogow sababta?
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya shirka Kampala ee nabadda, isdhexgalka iyo kobcinta dhaqaalaha Afrika
Theresa May oo iclaamisay iscasilaadeeda iyada oo qiireysan